Lukashenka sa Lukashenko? Nahoana ny media miteny anglisy no mampiasa fanononana samihafa an’ilay mpitarika Belarosiana · Global Voices teny Malagasy
Ny valiny: Arakarany.
Voadika ny 23 Aogositra 2020 15:55 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Español, Ελληνικά, Esperanto , українська, Français, English
Angona lohateny avy amin'ny fampitam-baovao miteny anglisy mampiseho zotran-dahatsoratra isan-karazany amin'ny fampiasana ny anaran'ny filohan'i Belarus hatry ny ela. sarintany ireo faritany Belarus avy amin'i Golbez (CC BY-SA 3.0). Saripikan'i Alexander Lukashenko avy amin'i Serge Serebro, Vitebsk Popular News (CC BY-SA 4.0). Sary natambatr'i Georgia Popplewell (CC BY 3.0)
Rehefa hita amin'ny lohateny manerantany i Belarus hatramin'ilay fifidianana nampifanditra tamin'ny 9 Aogositra, nisongadina amin'ireo gazety iraisampirenena ny fanononana samihafa amin'ny anaran'ny filoha ela nitoerana teo amin'ny fitondrana. Lukashenka sa Lukashenko no izy?
Izy roa ny valiny. Manana fanononana roa ny anarana Lukashenko: Amin'ny fiteny Belarosianina io soratana hoe Аляксандр Лукашэнка , ary amin'ny fiteny rosianina, Александр Лукашенко. Vokatr'izay ny fandikana anarana ho amin'ny fiteny anglisy dia mifototra amin'ny ôrizinaly Belarosianina Alyaksandr Lukashenka, raha ilay iray miainga amin'ny fanononana rosiana kosa ho lasa Aleksandr (na ilay mitovy aminy amin'ny teny anglisy Alexander) Lukashenko.
Na ny teny Rosianina na ny teny Belarosianina dia samy teny ofisialy ao amin'ny Repoblikan'i Belarus, izay samy mahay fiteny roa samy manana ny ambaratongam-pahaizana ananany ny ankamaroan'ny mponina ao aminy. Na dia ahafahana mifankahazo ihany aza ireo fiteny roa ireo matetika, satria samy ao amin'ny sampana atsinanana amin'ny fiteny Slavonika, dia samy manana ny fiavahany manoloana ny fiteny ankilany. Amin'izao fotoana izao ny fiteny Belarosianina azo henoina sy hita amin'ireo lanonam-panjakana sy soratra eny an-dalambe sy ny tranon'ny minisitera manerana ny firenena ireny. Na izany aza ny ampahany be amin'ny fiainana ankapobe eny amin'ny tanandehibe dia tarihan'ny teny rosianina, ary somary lefy ny fiteny Belarosianina tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny antony izany amin'ny ampahany noho ny fijotson'ny anjara toerany ao amin'ny rafi-panabeazam-panjakana.
Raha misy ny sehatra fampitam-baovao tahaka ny The Guardian, The New York Times, ary ny BBC mampiasa ny teny rosianina navadika amin'ny endri-tsoratra latinina, (Lukashenko), ny Radio Free Europe kosa izay mampiely amin'ny fiteny Belarosianina, mampiasa ny endrika Belarosianina (Lukashenka). Ny mahaliana, nahita izahay tantara iray nataon'ny New York Times tamin'ny taona 2006 izay nampiasa ny anarana Belarisianina Lukashenka.
Misy fanavahana toy izany ihany koa tsikaritra amin'ny anaran'ny mpitarika ny fanoherana: Sviatlana Tsikhanouskaya ny anarany avy amin'ny teny anglisy, navadika ho endri-tsoratra latinina avy amin'ny teny Belarosianina Святлана Ціханоўская. Saingy lasa Svetlana Tikhanovskaya raha avadika avy amin'ny fanononana rosianina, Светлана Тихановская.
Koa satria niely nanerana ny firenena ny fihetsiketseham-panoherana, dia mety hanontany ihany koa isika amin'ny fomba fanononana ireo anaran-tanàna Belarosianina. Nanao fitokonana ve ny mpiasa ao Grodno (Rosianina) na Hrodna (Belarosianina), naneho ny heriny ve ny mpanao fihetsiketsehana tao Gomel na Homyel? Tsy dia nivaingana loatra ny fanononan'ny fampahalalam-baovao iraisampirenena tsindraindray ireo anaran-toerana Belarosianina.
Ho fanasarotan-javatra, ny Belarosianina, izay voasoratra amin'ny endrika Syrilika amin'izao fotoana, dia manana ihany koa ny alfabetany amin'ny endrika Latinina izay nampiasaina tamin'ny taonjato 19 sy 20, nantsoina hoe Łacinka, sy tamin'ny fotoana nibodoan'ny Nazi an'i Belarus tany amin'ny fanombohan'ny taompolo 1940s. Nisy avy eo fanononana lasitra fanampiny fantatra amin'ny hoe Taraškevica nampiasain'ny mpiteny Belarosianina any ivelan'ny firenena; mampiasa betsaka ny mitovy amin'ny endrika Sirilika ho lasitra Belarosianina amin'izao fotoana izany, saingy mitsipaka kosa ny sasany amin'ny fanavaozana ara-pitenenana ny belarosianina novolavolain'ny governemanta sovietika tamin'ny taona 1933.
Fanampin'izany, hatramin'ny taonjato faha-15, ny vitsy an'isa miozoomana Tatar monina ao amin'ny Grand Duchy an'i Lithuania izay nahatafiditra an'i Belarus amin'izao fotoana dia nanoratra ihany koa ny Belarosiana amin'ny fampiasana endri-tsoratra arabo nampifanarahana taminy, antsoina hoe Кітаб [Kitab] na ارابیصا [Arabitsa] rehefa nandao tsikelikely ny Tiorkika fitenin-drazany ry zareo ka nandray ny fiteny Slavonika Belarosianina, nefa mbola nahatoky ny Islam.
Mety hampitamberina tsiahy ho an'ny mampaky sasany amin'i Okraina, mpifanolotra sisitany amin'i Belarus avy ao atsimo, izany adihevitra izany. Taorian'ny zava-nitranga tamin'ny taona 2014 sy ny ady nanaraka izany tao atsinanan'ny firenena, nibahana tsy mbola nisy tahaka izany tamin'ny tsanganan-dahatsoratra gazety iraisampirenena ny firenena. Ady hevitra mafana no nitarika ny famoahana maro nanambara fa hanonona ny renivohitry ny firenena, nantsoina teo aloha hoe Kiev, araka ny fametrahana an-tsoratra okrainianina azy hoe Kyiv ry zareo. An-tapitrisany ny olona mailaka fiteny rosiana ao Okrainina, ary maro amin'izy ireo no ethnika Okrainianina, saingy tsy fiteny ofisialy io — avy amin'izany no nahatonga ireo tanàna any atsinanana Kharkiv sy Luhansk izay araka ny nifanarahana dia hotononina amin'ny endrika okrainianina, fa tsy Kharkov na Lugansk, araka izay tian'ny mponina ao aminy hiantsoana azy ireo.
Hafa dia hafa amin'i Okrainina ny toedraharaha politika sy sosialy-fitenenana Belarus. Saingy mbola mitohy manahiran-tsaina ny tonian-dahatsoratra manerana ny tany ireny lohahevitra ireny. Misy ny gazety alemà manondro ny firenena ho Weißrussland (midika ara-bakinteny hoe “Rosia Fotsy”) fa tsy Belarus, araka izay itiavan'ny Belarosianina azy. Ny firenena amin'ny ankapobeny dia antsoina hoe Белороссия (Byelorussia) amin'ny gazety rosianina, na dia efa misy aza ny fanamarihan'ny Belarosianina.
Ny fotoana tahaka itony no hanery ny toniandahatsoratra manerantany hihevitra indray hoe amin'iza moa ry zareo no hanao tamberin'andraikitra — amin'ny politikam-pitenenan'ny fanjakana, amin'ny fomba fitenenan'ny mponina ao amin'ny firenena iray, sa amin'ny mpamaky vahiny izay matetika mahafantatra ireo toerana amin'ny anarana hafa mihitsy, izay indraindray ntaolo? Tsy mora hatrany ny valin'izany. Saingy rehefa mitodika any amin'ny firenena iray tsy mahazatra ny fifantohan'izao tontolo izao, ny mangarahara no politika tsara indrindra — mamela ny mpamaky hahatakatra hoe tahaka ny ahoana ny lanjan'ny litera tokana.
Jereo bebe kokoa ny saritaka ao Belarus ato